On jan 3, 2020 3 209
Amin’izao andron’ny asaramanitra izao, tonga niarahaba ny minisitry ny fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rakotonirina Leon Richard, teny amin’ny trano fonenany, Andohalo ny fianakaviamben’ny Zandarimaria, androany maraina.
Nitarika izany ny sekreteram-panjakana misahana ny zandarimaria, ny jeneraly Ravalomanana Richard sy ny lehiben’ny fibaikoana ny jeneraly Njatoarisoa Andrianjanaka, notron’ny tomponandraikitra ambony sy manamboninahitra lefitra eo anivon’ny Zandarimaria. Nisy ny teny firariantsoa narahana fanolorana solom-bodiakoho sy fahatsiarovana ho an’ny minisitra.
Tetsy ankilan’izay, nisaotra ny mpamangy ny minisitra. Nirary soa ho an’ny zandarimariam-pirenena ihany koa. » Hita sy tsapa ny ezaka vitan’ny Zandarimariam-pirenena nandritry ny taona lasa na dia mafy aza ny nanatanterahana ny asa aman’andraikitra nankinina. Nankasitraka sy manohana manokana ny ezaka vitan’ny SEG sy ireo zandary rehetra aho. Mirary soa ho an’ny zandarimaria aho, mandritra ity taona vaovao ity mba hipaka amin’ny fiainam-bahoaka ifotony ny ezaka atao, ho « gendarmerie émergente » tokoa hanana ny maha-izy azy ka hiadanan’ny vahoaka arovana satria efa mitsangana ankehitriny ireo Toby maro toy ny CSAO, BRS, sns. », hoy ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, minisitry ny Fiarovam-pirenena, namarana ny fifampiarahabana.
Ny minisitry ny Fiarovam-pirenena, Rakotonirina Léon Richard ( Sary www.facebook.com/infocom.seg )
KIANJABEN’I MAHAMASINA: HANOMBOKA NY ALATSINAINY IZAO NY ASA FANAMBOARANA